Barashada Luuqadaha | Afrikaan I Saldhiga xalka caqabadaha
Posts in category Barashada Luuqadaha
Luuqad cusub ee barataa waxay wadataa faa’idadeeda. Luuqada cusub waxay kusiinnaysaa fahamka dhaqanka iyo taariiqda wadanka. Waxa kale ee u fududaanaya ruuxa markaas xiriirka iyo isdhaxgalka bulshada, taasoo leh faa’idooyin aan lasoo koobi Karin, sida shaqooyinka iyo waxbarashada. Luuqad waa furaha nolosha bini’aadamka, waxana lagu micneeya inay tahay nidaam isgaarsiineed oo bini’aadamka uu ku xiriiro, taas oo u kala baxda kuhadal iyo qoraal. Luuqada waa furaha koobaad ee albaabada kuu furaya. Waxaad kamid noqonaysaa bulshada, islamarkaasna waxbaad la qabsanaysaa. Luuqad barashadeeda wey adagtahay, laakiin waxkasta waxay u baahantahay in waqti lageliyo, luuqad inaad barataa waxay u baahanthay inaad waqti …
Luuqada Ingiriiska waa luuqad caalami ah, ayna ku hadlaan wadamo badan oo dunidda dacaladeeda ah. Luuqadani waxay hodan ku tahay xagga ereyada, waxaana la sheegaa in ay maalin kastaa areyo cusub ku soo kordaan. Haddaba waxaan jeclahay in aan wax ka taabto qaabka ugu fudud ee lagu baran karo luuqada Ingiriiska. Marka koowaad waa in aad la timaadaa niyad waayo waxaad niyid u hayn lagama yaabo in aad barato marka xiga waxaa lagaa doonayaa in aad Ingiriiska ka barato macalin ay wanaagsantahay ku dhawaaqida ereyada Ingiriiska tani aad bay muhiim u tahay waxa ugu adag luuqadani waa fahamka qofka adiga …
Luuqada waa tiraabyo ay dadka ku hadlaan kuwaas oo wada degan hal deegaan ama degmo. Waxay isku wada afgartaan luuqadaas ay ku wada hadlaan. Afka ama luuqada aan ku hadalno taariikhdeeda aad ayay u dheertahay. Laga soo bilaabo abuuritaankii Aabe Aadan c.s. Luuqadaha caalamka ka jiro waxaa lagu qiyaasaa inay dhanyihiin 6,500 luuqadood. In ka badan 2,000 oo luuqadood waxaa ku hadlo dad ka yar 1,000 qof. Luuqada ugu dadka badan ku hadlaa dunida waa luuqada loo yaqaano Mandarin Jayniis (Mandarin Chinese) waxaa ku hadlo luuqadaan 1,213,000,000 qof. Waxaa kaalinta labaad ku jirra luuqada Isbaanishka (Spanish). Waxaana ku hadlo …
Cashirkii Koowaad: Barashada Luuqada Ingariiska (English Learning Language) Luuqada English-ka waxay ka kooban tahay 26 xarfood oo ka billawda xarafka (A,) kuna dhamaada xarafka (Z). Alphabets (capital letters) (Iyagoo xarfaha waa weyn) A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Small letters (xarfaha yar-yar) a b c d e f g h I j k l m n o p q r s t u v w x y z Xarfahaas waxaa loo qaybiyaa labbo nooc oo kalla ah shaqal …
Marka horre waxaa muhiimsan inaan barano waxa uu yahay wadanka aan baranayno luuqadiisa. Luuqada Noorwajiyaanka ma ahan luuqad siddaas u adag waadna barani kartaa. Laakiin marka horre waxaad u baahantahay inay kaa go antahay barashada luuqadaan cusub. Hadaba si aan waxwalbo u ogaano waxaa muhiimsan inaan wax ka ogaano hab nololleedka dalka Noorway. Wadankaa waxaa la yiraahdaa: Noorway (Afsoomaali ahaan) Norway (English) Norge (Norsk) f.g: erayga Sk- waxaad ugu dhawaaqeysaa sidda SH- oo kalle. Si kor loogu qaado fursadaha muhaajiriinta ku nool Noorway wuxuu Baarlamaanka wadanku gaaray sharci u ogolaanayo qaar ka mid ah muhaajiriinta inay ka qaybqaataan barnaamijka horudhaca (introduksjonsloven). …
Kusoo dhawaaw Machadka Afkaarta Joogtada Ee Ganacsiga & Bulshada. Machadkaan waa machad marwalbo u tagaan siddii uu u soo saari lahaa afkaarta bulshada Geeska Afrika. Machadka AJ wuxuu kuu haayaa koorsooyin cusub oo aad ku barani karto luuqadaha kalla duwan sidda: Af-Soomaaliga (Somali) Ingariis (English) Carabi (Arabic) (العربية) Noorweejyaan (Norwegian) (Norsk) Luuqadahaan oo dhan waa lacag la’aan wax sharuud ahna laguuguma xeraayo. Asigoo qoraal, cod iyo muuqaalba waxaad kalla soconi kartaa shabakada (website) machadka.